XASAASI: Haddii Xiddigaha Liverpool Loo Ogolaaday In Qoysaskoodu Farxada Dabaaldega Horyaalka La Qaybsadaan Oo La Ogaaday - Gool24.Net
XASAASI: Haddii Xiddigaha Liverpool Loo Ogolaaday In Qoysaskoodu Farxada Dabaaldega Horyaalka La Qaybsadaan Oo La Ogaaday
Kooxda dhawaan kusoo guuleysatay horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa ugu dambayn koobka ay mudada dheer ka soomanayd habeen dambe gacmaha loo gelin doonaa isla markaana kor u qaadi doonta.
Kooxda uu hoggaaminayo tababare Jurgen Klopp ayaa bishii hore loo caleemo saaray hanashada horyaalka balse habeen dambe xaflad gaar ah ugu dabaaldegi doona horyaalka ugu heerka sarreeya England oo ay mudo 30 sano ah sugayeen.
Mid kamida su’aalaha waaweyn ee la iska weydiinayay dabaaldega Reds ee habeen dambe ayaa ahayd miyay xiddigaha kooxda qoysaskoodu kala qayb geli doonaan farxada habeen dambe?
Sida uu sheegayo wargeyska Liverpool Echo, Liverpool iyo xiddigaheeda ayay maamulka horyaalku u ogolaadeen inay habeen dambe qoysaskooda keenaan garoonka.
Waxa hore loo filayay in shaqsiyaadka ay jecel yihiin xiddigaha Liverpool iyo qoysaskooda la diidi doono inay habeen dambe kasoo xaadiraan Anfield sababtoo ah sharciyada adag ee Premier League uga yaala xanuunka Korona tan iyo soo laabashadii kubadda cagta.
Go’aanka kama dambaysta ah ayaa ku jira gacmaha kooxda la telinta nabadgelyada ee magacooda loosoo gaabiyo GSAG waxaana la filayaa inay maanta oo Salaasa ah go’aamin doonaan arrintaas.
Liverpool ayaa rajaynaysa in la debcin doono sharciyada xanuunka Korona marka ay horyaalka u dabaaldegayaan balse waxa lasoo warinayaa in loo baahan doono inay af-xidh (Face Mask) xidhaan dadka garoonka jooga marba haddii shaqsiyaad dheeri ah garoonka loo ogolaanayo.
Kaddib guushii Chelsea ay ka gaadhay Man City bishii hore ee horyaalka loogu xaqiijiyay Liverpool, kumanaan kamid ah taageerayaasha Liverpool ayaa iskugu yimid banaanka Anfield si weyn oo shuruuc la’aan ahna u xafladaystay.